SCOနိုင်ငံများ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မည့်ရုရှားနိုင်ငံသို့ တရုတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်သုံးယာဉ်များပို့ဆောင် - Xinhua News Agency
SCOနိုင်ငံများ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မည့်ရုရှားနိုင်ငံသို့ တရုတ်တပ်ဖွဲ့များနှင့်စစ်သုံးယာဉ်များပို့ဆောင်
ကုလသမဂ္ဂ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးစိတ်ကွဲများဆိုင်ရာ ကွန်ဗားရှင်း ၁၅ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ COP15 ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့တွင် အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်က ကျင်းပစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မန်ကျိုးလီ၊ သြဂုတ် ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့SCO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ၏ ရုရှားနိုင်ငံတွင် ကျင်းပမည့် “ Peace Mission 2021 “ ဟု အမည်ရသော အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်မှု ပူးတွဲ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု တွင် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ စစ်သည်များလည်း ပါဝင်လေ့ကျင့်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပြိုင်ပွဲအတွက် တရုတ် စစ်သည်တော် ပထမ အသုတ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း အတွင်းမွန်ဂို ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရှိ မန်ကျိုး ကုန်းတွင်းဘူတာမှ ပြီးခဲ့သည့် စနေနေ့တွင် ရထားဖြင့်စတင်ထွက်ခွါခဲ့သည်။
စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအား စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ရုရှားနိုင်ငံ အော်ရန်ဘတ်မြို့၌ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။
ယခု ခရီးစဉ်သည် စစ်တပ်များနှင့် စစ်ပွဲသုံးယာဉ်များအား စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ကုန်းကြောင်းပို့ဆောင်သည့်အရှည်ဆုံး ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီး ခရီးအကွာအဝေးမှာ စုစုပေါင်း ၆,၃၀၀ ကီလိုမီတာ ရှိသည်။
ကပ်ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လက်နက်ပစ္စည်းများအတင်အချပြုလုပ်ရာတွင် ပျက်စီးထိခိုက်မှုမရှိစေရန် တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားလုံး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ကြရသည်။
ယာဉ်များပေါ်သို့အတင်အချလုပ်ဆောင်ရာတွင် တိကျသော တည်နေရာ ရှာဖွေမှုနှင့်တိုင်းတာမှု စနစ်များအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ယာဉ်မောင်းများအား ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို လျှင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်
ခရီးစဉ်၌ အသစ်တီထွင်ထားသည့် ရာသီမရွေးသယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာများအား အသုံးပြုပြီး အပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနှင့် လေဆာဖြင့် အာရုံခံခြင်းနည်းပညာကဲ့သို့ နည်းပညာများထည့်သွင်းထားကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များပါဝင်မည့် “Peace Mission 2021”တွင် တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ၏ မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာချုပ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အဓိက ပါဝင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး အင်အားစုစုပေါင်း ၅၅၀ ကျော်နှင့် စစ်ပွဲသုံး ယာဉ်နှင့်လက်နက်ကိရိယာ ၁၃၀ ကျော် ပါဝင်သွားမည်ဟု အမျိုးသားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းအချက်အလက်များအရသိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ တာဝန်ရှိသူSun Bin က “ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ခရီးရှည်ပို့ဆောင်ရတဲ့ အခြေအနေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ကိရိယာအသစ်တွေကို သုံးရပါတယ်၊ သယ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အထောက်အကူတွေကို လျှော့ချနိုင်ရုံသာမက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့စစ်သားအရေအတွက်ကိုပါ လျော့နည်းအောင်လုပ်ဆောင်ရတာပါ” ဟုဆိုသည်။
အဆိုပါ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာ SCO ၏ မူဘောင်အတွင်းကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြား နက်ရှိုင်းသည့် စစ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အပြင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ခြိမ်းခြောက်မှုအသစ်များအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအားပူးတွဲကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ SCO သည် ယခုနှစ်တွင် သက်တမ်း နှစ်ပေါင်း ၂၀ တိတိ ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | Chinese troops leave for SCO military exercise in Russia
MANZHOULI, Aug. 29 (Xinhua) –The first batch of Chinese troops transported by railway on Saturday departed Manzhouli,aland port in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region, for Russia to attend “Peace Mission 2021,”ajoint counterterrorism military exercise of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) member states.
The exercise will be held in Orenburg, Russia, from Sept. 11 to 25.
The journey to transport troops and military vehicles abroad for military exercises is the longest one of its kind, coveringadistance of 6,300 kilometers.
To meet the pandemic prevention and control requirements and ensure efficient loading and unloading, all units have optimized procedures.
Newly-developed all-weather loading assistance devices have been used,
supported by technologies such as infrared and laser sensing,
to improve the accuracy in locating and measurement during loading process and help drivers complete their tasks quickly.
The participating Chinese troops of “Peace Mission 2021” are mainly from the Northern Theater Command of the People’s Liberation Army, and consist of more than 550 personnel, and 130 vehicles and equipment, according to the information Xinhua obtained from the Ministry of National Defense on Friday.
The routine exercise within the framework of the SCO is aimed at deepening defense and security cooperation among member states, improving their ability to cope with new challenges and threats, and jointly safeguarding regional peace and security.
The SCO marks its 20th anniversary this year.
နိုင်ငံရေးနှင့် ဆက်နွယ်သည့် ကိုဗစ်ရောဂါ လက္ခဏာများ
tizuiyang အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် : သူတစ်ပါးအတွက် ကြားကဒဏ်ခံရသူ ဥပမာ : မကြာသေးခင်က အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ရှုံးနိမ့်မှုအတွက် ကြားကဒဏ်ခံရသူမှာ “တိုက်ခိုက်လိုစိတ်မရှိသူများ” အဖြစ် ဖော်ပြခြင်းခံရသည့် အာဖဂန်စစ်သားများ ဖြစ်သည်။ (Xinhua)